SAWIRRO-Roobab ka curtay qaybo kamid ah gobolada Bari iyo Karkaar ee Puntland. – Radio Daljir
Diseembar 18, 2016 11:36 g 0
Boosaaso, Dec 19 2019-Wararkii ugu dambeeyey ee aan kahelayno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi uu ka da’ay roob lagu diirsaday, oo soo bilowday gelinkii dambe ee xalay.
Dhanka kalena agaalada Qardho ayaa iyana waxaa laga dareemayaa jawi roobaad, waxaana ka dayey saaka aroortii roob shuux ah iyadoona magaalada ay qariyeen daruuro biyeysan.
Roobabkaan ayaa kusoo beegmaya xilli deegaamo badan oo katirsan puntland ay ka jirto abaar saamaysay dadka iyo duunyadaba.
Xukuumadda Soomaaliya oo soo dhoweysey baaritaankii musuq maasuq ee Soma Oil.